Home News Maxeey ku dhacday in shaqo joojin lagu sameeyo Gudoomiyaha Degmada Yaaqshiid
Maxeey ku dhacday in shaqo joojin lagu sameeyo Gudoomiyaha Degmada Yaaqshiid
Gudoomiye ku xigeenka dhanka maamulka iyo Maaliyadda gobolka Banaadir ayaa markale shaqo joojin ku sameeyay gudoomiye degmo oo ka mid ah Gudoomiyeyaasha gobolka Banaadir, xilli uu dalka ka maqan yahay Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow.
Gudoomiye ku xigeenka ayaa shaqo joojin ku sameeyay Guddoomiyaha Degmada Yaaqshiid Axmed Maxamed Xasan (Geedow).
Wareegtada ayaa lagu xusay in shaqada guddoomiyaha degmada Yaqshiid uu sii haynayo Guddoomiye kuxigeenka arrimaha bulshada degmadaas.
Gudoomiyihii degmada Xamarweyne Cumar Shariif Jeeg ayaa horay Shaqo joojin uu ugu sameeyay ka dib markii lagu eedeeyay in uu hareer maray hanaanka maamulka.
Previous articleSargaal ka Tirsan kooxda daacish oo gacanta lagu dhigay
Next articleWararkii Ugu Dambeeyay weerar lagu qaaday Ciidamo Amisom ah